कलियुगका कुरा: नामै झल्लु राखिदिएपछि केही गर्न परेन यार?
नामै झल्लु राखिदिएपछि केही गर्न परेन यार?
कस्तो उडाए भने आज दिनभर प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई दुरबिनको बिर्कै नखोली के हेरेको भन्दै। केटाहरुले बुझ्नु पर्ने नि - 'त्यसै त झल्लु भइन्न, प्रमाणित नि गर्न परो। भएन शिवरात्रीको दिनको फोटो पो हो त यो... प्रधानमन्त्री पनि शिवभक्त हुन सउछन् नि...
Nirmal Gauli, Kamred Hulaki, Bhaskar Gyawali and3others like this.
Lohsirk Po आफन्तलाई जिस्क्याए भनेर दाईलाई चित्त दुखेच.. :D